राष्ट्रिय जनगणनामा मातृ मृत्युको पनि अध्ययन- स्वास्थ्य - कान्तिपुर समाचार
राष्ट्रिय जनगणनामा मातृ मृत्युको पनि अध्ययन
काठमाडौँ — राष्ट्रिय जनगणना २०७८मा मातृ मृत्युको पनि अध्ययन गरिने भएको छ । मातृ मृत्युदर निर्धारण गर्ने र ती मृत्युको कारणहरू पहिचान गरी सुरक्षित मातृत्व सेवालाई सुदृढ गर्ने उद्देश्यले जनगणनामा समेटिन लागिएको हो ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र केन्द्रीय तथ्यांक विभागको सहकार्यमा हुन लागेको सो अध्ययनमा जनगणनाका गणकहरूले कुनै घरपरिवारमा गत १२ महिनामा १५ देखि ४९ वर्षको महिलाको मृत्यु भए नभएको यकिन गर्नेछन् ।
मातृ मृत्यु भएको घरपरिवारको पहिचान कात्तिक २५ देखि मंसिर ९ सम्म गरिनेछ भने मौखिक परीक्षण कात्तिक २६ देखि मंसिर मसान्तसम्म हुनेछ ।
तथ्यांक विश्लेषण गरी प्रतिवदेन प्रकाशन गरिने र प्रतिवेदनको आधारमा मातृ मृत्यु रोकथामका लागि कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यन्वयन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रकाशित : आश्विन १९, २०७८ १८:०२
चाडपर्वलाई लक्षित गरी बजार अनुगमन तीव्र
काठमाडौँ — सरकारले चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले मंगलबार चाडपर्वलाई लक्षित गरी काठमाडौंको न्यूरोड र मख्खन गल्लीमा अनुगमन गरेको हो ।
बजार अनुगमनपछि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका निरीक्षण अधिकृत अमितकुमार झाले न्यू रोड र मख्खन गल्लीमा ७ वटाभन्दा धेरै पसलहरूमा अनुगमन गरेको बताए ।
उनले पसलहरुले बिक्री गरिरहेका लत्ताकपडा तथा खाद्य सामग्रीहरुको अनुगमन गरेको बताए । अनुगमनमा मुख्य समस्याहरु खरिदबिक्री बिलको रहेको बताए । उनले तीनजनालाई तत्काल जरिवाना गरेको र अन्य तीनजनालाई विभागमा बोलाएको बताए । उनले पसलमा मुख्य व्यापारी नभएकोले तीन दिनभित्र विभागमा उपस्थित हुनुपर्ने बताए ।
निरीक्षण अधिकृत झाले भने, ‘हामीले चाडपर्वलाई लक्षित गरेर बजार अनुगमन तीव्र बनाएका छौं, आज न्यूरोड र मख्खनगढीमा हाम्रो टोलीले अनुगमन गरेको छ, त्यहाँका ७ वटा भन्दा धेरै पसलहरुमा अनुगमन गरेका छौं, त्यसमध्ये ३ वटालाई तत्काल कारबाही गरेका छौं भने बाँकी तीन वटालाई विभागमा बोलाएका छौं ।’
चाडपर्वलाई लक्षित गरेर अनुगमन तीव्र बनाइएको विभागले जनाएको छ ।
प्रकाशित : आश्विन १९, २०७८ १७:४९
जडान भएको २ महिनामा पनि सञ्‍चालन भएन अक्सिजन प्लान्ट
भारतीय कम्पनीको औषधि ‘पिरिमाइड’ गुणस्तरहीन
स्तन क्यान्सर : भ्रम र वास्तविकता
डा. अनामिका झा, डा. सुमन लामिछाने
असमान संसारमा मानसिक स्वास्थ्यको सवाल
कोभिड विरुद्ध पूर्ण खोप लगाउने अधिकांशमा एन्टिबडी
काठमाडौँ महानगरमा शुक्रबारदेखि भेरोसेल खोप लगाइने